မိမိရဲ့ ခံစားချက်တွေကို သံစဉ်တွေကနေတစ်ဆင့် ဖုန်းခေါ်ဆိုလာသူများနဲ့ ဝေမျှနိုင်ပါပြီ။ FunTone ၀န်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် မိမိနှစ်သက်ရာပြည်တွင်းပြည်ပ ဂီတကိုကိုယ်စားပြုနိုင်ပြီး မိမိအား ဖုန်းခေါ်ဆိုသူကိုလည်း တစ်ချိန်တည်းမှာ ဖျော်ဖြေမှုရစေမှာပါ။
အခုပဲ FunTone ကို စတင်အသုံးပြုလို့ မိမိကို ခေါ်ဆိုသူအနေနဲ့ ပြန်လည်ဖုန်းဖြေဆိုမှု စောင့်နေစဉ်မှာ ငြီးငွေ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့ တူ---တူ ဆိုတဲ့ အသံအစား ဂီတသံစဉ်များကို နားဆင်နိုင်ပါပြီ။ FunTone ၀န်ဆောင်မှုတွင် လစဉ်ဝန်ဆောင်မှု၊ အပတ်စဉ်ဝန်ဆောင်မှုနှင့် နေ့စဉ်ဝန်ဆောင်မှုများထဲမှ မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ ကို ရွေးချယ်ရယူနိုင်ပါသည်။
ပေါ့ပ်၊ ရော့ခ်နဲ့ R’n’B အပါအဝင် နောက်ဆုံးပေါ် ပြည်တွင်းသီချင်းရော ပြည်ပသီချင်းများပါ ထောင်နှင့်ချီသော FunTone များထဲမှ ရွေးနိုင်ပါမည်
FunTone ဝန်ဆောင်မှု အစီအစဉ်ကို ရယူရန် အောက်ဖော်ပြပါ နည်းလမ်းများဖြင့်ရယူနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
3333 သို့ SMS ပေးပို့ခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း
“Funtone” ကို လစဉ်အတွက်လည်းကောင်း
“Funtone7” ကို အပတ်စဉ်အတွက်လည်းကောင်း
“Funtone1” ကို နေ့စဉ်အတွက်လည်းကောင်း
*3333# သို့ဖုန်းခေါ်ဆို၍ ကြိုက်နှစ်သက်ရာကို ရွေးချယ်ပါ။
3333 IVR ကို ဖုန်းခေါ်ဆို၍ နေ့စဉ် ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူပါ။
နေ့စဉ် ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူထားပါက လက်ဆောင်အနေဖြင့် System ကသတ်မှတ်ပေးသော သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို FunTone အဖြစ်ရယူနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
FunTone ဝန်ဆောင်မှုကို အောက်ပါအတိုင်း ရယူနိုင်ပါသည်။
send SMS STOP to 3333 or Dial *3333*0# or Call 3333
ဝန်ဆောင်မှုကိုပယ်ဖျက်ရန် 3333 သို့ STOP ဟု ပေးပို့ခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ *3333*0# ကိုဖုန်းခေါ်၍ လည်းကောင်း၊ 3333 ကို ဖုန်းခေါ်၍ လည်းကောင်း ဝန်ဆောင်မှုများကို ပယ်ဖျက်နိုင်ပါသည်။
FunTone တွင် မိမိနာမည်ကို ထည့်သုံးနိုင်ပါပြီ။
သို့ဖြစ်ရာ NameTone ကို အောက်ပါနည်း တစ်နည်းနည်းဖြင့် ရယူနိုင်မည်။
zone.ooredoo.com.mm မှတစ်ဆင့် ရယူခြင်း
3334 ထံ အခမဲ့ ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း
3334 ထံ မိမိနာမည်ကို အခမဲ့ SMS ပေးပို့ခြင်း
စာရင်းသွင်းလိုက်ပါက NameTone နှင့်ပတ်သက်သည့် အတည်ပြု SMS ကို လက်ခံရရှိပါမည်။
အကယ်၍ မိမိလိုချင်သည့်အမည်ကိုမရရှိလျှင် 3334 ထံ ဖုန်းခေါ်ပြီးနောက် ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ပါက (၅) ရက်အတွင်း NameTone ကို ဖန်တီးပြီးဖြစ်မည်။
FunTone သုံးလက်စဖြစ်ပါက NameTone နှင့် FunTone သီချင်းကို အလှည့်ကျအသုံးချနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
စာရင်းသွင်းခ လစဉ် (၁,၁၀၀ ကျပ်) သို့မဟုတ် အပတ်စဉ် (၂၇၅ ကျပ်)ကို မိမိအသုံးပြုသည့်အပေါ်မူတည်၍ ကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်သည်။ NameTone တစ်ခုအတွက် တစ်လ ၃၂၀ ကျပ် ကျသင့်ပါမည်။
သို့သော် FunTone သုံးလက်စဖြစ်ပါက ယခု NameTone အတွက် စာရင်းသွင်းခ ထပ်မံပေးစရာမလိုပါ။
FunTone လစဉ် (သို့) အပတ်စဉ် (သို့) နေ့စဉ် ၀န်ဆောင်မှုအတွက် ဖုန်းနံပါတ် 3333 သို့ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း သို့မဟုတ် *3333# ကို နှိပ်ခြင်း သို့မဟုတ် 3333 သို့ SMS ပေးပို့ခြင်းဖြင့် FunTone ၀န်ဆောင်မှုကိုရယူနိုင်ပါသည်။ ၀န်ဆောင်မှုရယူခြင်းအတွက် တစ်လလျှင် ၁၁၀၀ ကျပ်၊ တစ်ပတ်(၇ရက်)လျှင် ၂၇၅ကျပ်နှင့် တစ်ရက်လျှင် ၄၀ကျပ်နှုန်း သာကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။
သက်တမ်းတိုးရာတွင် ဖုန်းထဲတွင်လုံလောက်သော လက်ကျန်ငွေပမာဏရှိရုံဖြင့် အောက် ဖော်ပြပါအတိုင်း အလိုလျောက်သက်တမ်းတိုးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
၁ လအတွက် ၃၀ ရက် ပြည့်လျှင်
၁ ပတ်အတွက် ၇ ရက် ပြည့်လျှင်
၁ နေ့အတွက် ၂၄ နာရီ ပြည့်လျှင် အသီးသီး သက်တမ်းတိုးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
လစဉ် ၀န်ဆောင်မှု (သို့ ) အပတ်စဉ် ၀န်ဆောင်မှု (သို့) နေ့စဉ် ဝန်ဆောင်မှု အတွက် မိမိစိတ်ကြိုက် သီချင်းရွေးချယ်သတ်မှတ်ရာတွင် သီချင်းတစ်ပုဒ်လျှင် ရက်ပေါင်း သုံးဆယ်အတွက် ၃၂၀ ကျပ် သာကျသင့်ပါမည်။
သက်တမ်းတိုးခြင်းအောင်မြင်ပါက မိတ်ဆွေထံ အတည်ပြု SMS ဖြင့် အကြောင်းကြားပါလိမ့်မည်။ ၄၈ နာရီအတွင်း ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်း ကုန်ခါနီးပါက အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပါသည်။
3333 သို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းအတွက် တစ်မိနစ်လျှင် ၂၇ ကျပ်သာကျသင့်မည်ဖြစ်သည်။
မိမိသူငယ်ချင်းနှင့် အလားတူ FunTone မျိုးမည်သို့ရရှိနိုင်မည်နည်း။
မိတ်ဆွေလဲ အလားတူ FunTone လစဉ်ဝန်ဆောင်မှု မျိုးရနိုင်ပါပြီ။ FunTone copy ကိုသာသုံးလိုက်ပါ။ FunTone ကိုနားဆင်ရစဉ်မှာ * ကိုနှိပ်လိုက်ရင် အလို အလျောက် မိမိရဲ့ FunTone account ထဲကို copy လုပ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Copy လုပ်တဲ့အတွက် Premium FunTone ဝန်ဆောင်မှုကို စာရင်းသွင်းရန် ရက် ၃၀ အတွက် ၃၂၀ ကျပ် ကျသင့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
FunTone ကိုအသုံးပြုနေသူ မဟုတ်ဘဲ ဖုန်းခေါ်ဆိုသံကြားရစဉ် * ကို နှိပ်လိုက်ပါက FunTone ၀န်ဆောင်မှုအတွက် စတင်စာရင်းပေးသွင်း အသုံးပြုသည်ဟု သတ်မှတ်ပြီး ကူးယူရန်တောင်းဆိုသော FunTone အား မိမိစိတ်ကြိုက် FunTone အဖြစ် ငှားရမ်းသည်ဟု သတ်မှတ်ပါမည်။
ကိုယ့် FunTone အကောင့်ကို ဘယ်လို စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါသလဲ။
လစဉ် (သို့ ) အပတ်စဉ် (သို့) နေ့စဉ် အတွက် FunTone အကောင့်နှင့် မိမိ စိတ်ကြိုက် FunTones စုဆောင်းမှုကို စီမံခန့်ခွဲရန် 3333 သို့ခေါ်ဆိုနိုင်သည်။ FunTone အသစ်ဝယ်ခြင်း အဟောင်းဖျက်ခြင်း၊ အခြား Ooredoo သုံးစွဲသူများသို့ FunTone များ လက်ဆောင်ပေးပို့သတ်မှတ်နိုင်သည်။
FunTone ၀န်ဆောင်မှုသည် မည်မျှ ကျသင့်သနည်း။
၁) FunTone လစဉ်ဝန်ဆောင်မှုအတွက် ရက် ၃၀ လျှင် ၁၁၀၀ ကျပ် ကျသင့်မည်ဖြစ်ပြီး ၀န်ဆောင်မှုစတင်ယူည့်နေ့ မှစပြီး ရက် ၃၀ ပြည့်သည့်နေ့ တွင် အလိုအလျှောက် သက်တမ်းတိုးမည်ဖြစ်ပါသည်။
၂) FunTone အပတ်စဉ်ဝန်ဆောင်မှုအတွက် ၇ ရက် လျှင် ၂၇၅ ကျပ် ကျသင့်မည်ဖြစ်ပြီး ၀န်ဆောင်မှုစတင်ယူည့်နေ့ မှစပြီး ၇ ရက်ပြည့်လျှင် အလိုအလျှောက် သက်တမ်းတိုးမည်ဖြစ်ပါသည်။
၃) FunTone နေ့စဉ်ဝန်ဆောင်မှုအတွက် ၁ ရက် လျှင် ၄၀ ကျပ် ကျသင့်မည်ဖြစ်ပြီး ၀န်ဆောင်မှုစတင်ယူည့်နေ့ မှစပြီး ၂၄ နာရီ ပြည့်လျှင် အလိုအလျှောက် သက်တမ်းတိုးမည်ဖြစ်ပါသည်။
FunTone ကိုသုံးစွဲမှု ဘယ်လိုရပ်ဆိုင်းနိုင်ပါသလဲ။
လစဉ် (သို့ ) အပတ်စဉ်အတွက် *3333*0# ကိုခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့် ရပ်ဆိုင်းနိုင်ပါတယ်။ မိမိ account ထဲတွင်ရှိသော FunTones များအားလုံးကို ဖျက်လိုက်မည်ဖြစ်ကြောင်း သတိပြုပါ။ ထပ်မံ၍ FunTone ကိုသုံးစွဲရန် *3333# အားထပ်မံခေါ်ဆိုပါ။
DD Code ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
Direct Dial code(DD code) ဆိုသည်မှာ ဂဏန်းရှစ်လုံးပါဝင်သော IVR နံပါတ်ဖြစ်ပါသည်။ သက်ဆိုင်ရာ FunTone ၏ တိုက်ရိုက်ကုဒ်ကိုဖုန်းခေါ်ဆိုပြီး မိမိ၏ကိုယ်ပိုင် FunTone အဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ ထိုကုဒ်နံပါတ်သို့ခေါ်ဆိုခြင်းအတွက် တစ်မိနစ်လျှင် ၂၇ ကျပ် ကျသင့်ပါမည်။ DD Code များကို Facebook စာမျက်နှာ နှင့် https://zone.ooredoo.com.mm တွင် အချိန်နှင့်တပြေးညီ ကြေငြာ သွားပေးပါမည်။
NameTone နှင့် သက်ဆိုင်သော အမေးများသည့် မေးခွန်းများ
Name Tone ဝန်ဆောင်မှုအတွက်ဝန်ဆောင်ခ မည်မျှကျသင့်မည်နည်း။
ဝန်ဆောင်ခသည် FunTone ဝန်ဆောင်ခနှင့် အတူတူဖြစ်သည်။ စာရင်းသွင်းခ တစ်လ ၁,၁၀၀ ကျပ် (သို့မဟုတ်) တစ်ပတ် ၂၇၅ ကျပ်နှင့် NameTone အသုံးပြုခ တစ်လ ၃၂၀ ကျပ် ကျသင့်မည်ဖြစ်သည်။
NameTone အသုံးပြုရန် မည်သို့ဆောင်ရွက်ရမည်နည်း။
NameTone အတွက် အောက်ပါနည်း တစ်နည်းနည်းဖြင့် စာရင်းသွင်းနိုင်သည်။
၁. www.zone.ooredoo.com.mm မှတစ်ဆင့် ရယူခြင်း
၂. 3334 ထံ အခမဲ့ ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း
၃. 3334 ထံ မိမိနာမည်ကို အခမဲ့ SMS ပေးပို့ခြင်း
လိုချင်သည့် NameTone ကိုမရရှိပါက မည်သို့ဆက်လုပ်ရမည်နည်း။
အကယ်၍ မိမိလိုချင်သည့် NameTone ကို မရပါက 3334 ထံဖုန်းခေါ်၍ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ပါ။
ညွှန်ကြားချက်နှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ပြီးနောက် မည်သည့်အချိန်တွင် NameTone ကို စတင်အသုံးပြုနိုင်မည်နည်း။
ညွှန်ကြားချက်နှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ပြီးပါက (၅) ရက်အတွင်း NameTone ကို အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
NameTone နှင့် တေးသီချင်း(Funtone)၊ နှစ်မျိုးလုံးအသုံးပြုနိုင်ပါသလား။
နှစ်မျိုးစလုံးကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ရာ NameTone နှင့် တေးသီချင်း (Funtone) တစ်လှည့်စီအလုပ်လုပ်ပါမည်။
NameTone ကို မည်သို့ပယ်ဖျက်ရမည်နည်း။
3333 ထံဖုန်းခေါ်ဆို၍ FunTone အောက်ရှိ NameTone ကို ပယ်ဖျက်ပေးရပါမည်
NameTone အပြောင်းအလဲအတွက် မည်သို့ဆောင်ရွက်ရမည်နည်း
လက်ရှိ NameTone ကိုမူ အပြောင်းအလဲလုပ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ သို့ဖြစ်ရာ သုံးလက်စ NameTone ကို အရင်ပယ်ဖျက်ပေးပါ။ ထို့နောက် NameTone အသစ်တစ်ခုအတွက် တစ်လ ၃၂၀ ကျပ်အကုန်အကျခံ၍ အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်
NameTone ကို ဆက်လက်အသုံးမပြုလိုတော့ပါက မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း
NameTone ကို ဆက်လက်အသုံးမပြုလိုတော့ပါက သက်ဆိုင်ရာ NameTone ကို မိမိအကောင့်မှနေ၍ ပယ်ဖျက်ပါ။ သို့သော် FunTone အတွက် စာရင်းမပယ်ဖျက်မချင်း စောင့်ဆိုင်းချိန်ခါတေးသံသာ(CRBT)အနေဖြင့် ဆက်လက်အလုပ်လုပ်နေမည်ဖြစ်သည်။
ဖော်ပြပါ ဈေးနှုန်းများတွင် ကုန်သွယ်ခွန် ၅ ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်ပါသည်။
ဖော်ပြပါဝန်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ယခုဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်ရှိသုံးစွဲသူထံ ကြိုတင်အသိပေးခြင်းမရှိပဲ အချိန်မရွေး ပြင်ဆင်ပိုင်ခွင့်၊ ရုပ်သိမ်းပိုင်ခွင့်သည် အူရီဒူးမြန်မာလက်ဝယ်တွင်ရှိသည်။
ဆက်သွယ်ရန် ကူညီရတဲ့အတွက် ၀မ်းသာပါတယ်။